क्यान्टन फेयरको लागि चिनियाँ भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
व्यापार शो सूची
लोकप्रिय व्यापार मेला
चिनियाँ भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
१२129 औं चीन आयात र निर्यात मेला (क्यान्टन फेयर २०२१ वसन्त) अप्रिल १ 15 देखि २th सम्म अनलाइन हुनेछ।
सूचना: निम्न जानकारी नियमित क्यान्टन मेला मात्र हो, 130 क्यान्टन मेला को लागी होईन!
केन्टन फेयर भ्रमण गर्न मलाई चिनियाँ भिसा चाहिन्छ?
को बाहेक देशहरु बाट चीनको भिसा मुक्त नीति, कृपया चिनियाँ भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस् (कुनै पनि प्रकारको, सामान्यतया "M") सँग क्यान्टन फेयरमा आमन्त्रित तपाई चीन जानु भन्दा पहिले।
यहाँ तपाईंले चिनियाँ भिसा लिन सक्ने ठाउँ छ।
दूतावास वा तपाईंको देशमा PRChina को महावाणिज्य दूतावास (मिशन ओभरसीज)। प्रत्येक राज्य फरक छ। अधिक जानकारी प्राप्त गर्न कृपया उनीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। धेरै कागजी कार्यहरू तर कम पैसा खर्च।
एक स्थानीय ट्राभल एजेन्सी वा भिसा एजेन्सी। यो आफैबाट यो गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। दूतावास प्रायः प्रोफेशनल एजेन्टलाई भिसा आवेदनका लागि मद्दत गर्न चाहन्छ।
72 / 144 घण्टा ट्रांजिट भिसा छुट नीति। (प्रश्न-उत्तर on२ घण्टाको ट्रान्जिट भिसा छुट नीतिमा)
आधिकारिक क्यान्टन फेयर आमन्त्रित सूची मात्र क्रेताको नाम, राष्ट्रीयता, र कम्पनी नाम। सामान्यतया, कुनै चिनियाँ कारखाना वा विदेशी व्यापार कर्पोरेसन (उद्यमहरू) बाट आमन्त्रित चिनियाँ भिसा अनुप्रयोगहरूको लागि अधिक काम गर्दछ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि क्यान्टन फेयरले जारी गरेको निमन्त्रणाले तपाईंलाई चिनियाँ भिसा लिन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, तर यो सबै तपाइँको देशको चिनियाँ दूतावासमा निर्भर गर्दछ।
मुख्य भूमि चीन ह Hongक Kong, मकाउ, र ग्वाzhou्झाउ फिर्ता आउन आवश्यक छ कि खरीददारहरु, बहु-प्रवेश भिसा को लागी आवेदन गर्नु पर्छ।
यो भिसा विस्तार गर्न र चीन मुख्य भूमि मा एक नयाँ भिसाका लागि आवेदन गर्न गाह्रो छ। हामी ह Hongक Kong गएर यसलाई पुग्न सुझाव दिन्छौं।
यदि तपाईं पहिले नै चिनियाँ भिसा बिना चीनको लागि उडान गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले ह Hongक Kong उडान गर्नुपर्नेछ।
म कसरी भाग लिन्छु
क्यान्टन फेयर स्थान
क्यान्टन फेयरको लागि मिति
पछिल्ला 16 बर्षमा हजारौं व्यवसायीको सेवा गरियो
टेलिफोन: + 852 8170 0688